Jami: waa barxad cusub oo loogu talagalay isgaarsiinta xorta ah iyo midka caalamiga ah | Laga soo bilaabo Linux
Jami: barxad isgaarsiineed oo bilaash ah oo caalami ah
Jami waa magaca cusub ee arjiga hore ee loo yaqaan Ring. Kuwaas oo 2 jeer oo hore aan ka hadalnay. Markii ugu horreysay ee maqaalka 2016 loo magacaabay «Giraanta: Beddelka Skype ee GNU / Linux»Ka dibna mid kale oo ka socda 2018 oo la yiraahdo«Codsiyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee GNU / Linux 2018/2019«.
Laga bilaabo sanadkan, 2019, mashruuca barnaamijka 'Ring' wuxuu noqday Jami. Si aad u noqotid mashruuc aad u badan oo bilaash ah oo caalami ah, oo u furan bulshooyinka isticmaalayaasha iyo soo-saareyaasha Software-ka Bilaashka ah iyo Ilaha Furan, iyo qaybaha Ganacsiga iyo Shirkadaha.
Kuwa horumariya hadda waxay ku sifeeyeen Jami:
Jami waa madal isgaarsiineed oo bilaash ah oo caalami ah oo ilaalisa asturnaanta iyo xorriyadaha adeegsadayaasheeda. "
Oo uu ku jiro bogga rasmiga ah ee rasmiga ah waxay si cad u yiraahdaan hadda waa codsi:
"Waxaa loogu talagalay dadweynaha guud iyo sidoo kale warshadaha, Jami waxay ujeedadeedu tahay inay siiso dhammaan isticmaaleyaasheeda aalad isgaarsiineed oo caalami ah, bilaash ah, aamin ah, oo lagu dhisay qaab dhismeed baahsan oo aan u baahnayn mas'uuliyiinta ama xarumaha dhexe inay ku shaqeeyaan."
Jami dhinac ka mid ah ayaa looga mahadcelin karaa inuu yahay codsi fariin fudud ah, taas oo ah, barnaamij loogu talagalay farriimaha qoraalka ah, wicitaannada maqalka iyo muuqaalka ah, wareejinta feylka, wada-hadalka fiidiyowga, iyo waxyaabo kale. Laakiin maxay runti ku tahay Jami inuu ka duwan yahay waa tikniyoolajiyadda aasaasiga ah ee taageera.
Intaa waxaa dheer in hadda loo oggolaado tabarucaadyo bilaash ah oo furan oo isku mid ah, iyo soo dhaweynta wax ku oolka ah ee caawimaadda iyo soo-jeedinta lagama maarmaanka ah, ee ku saabsan bulshadaada oo dhan, kuwaas oo si firfircoon ugala shaqeeya horumarinta iyo hagaajinta Jami.
1.2.2 Wicitaanada fiidiyowga
1.2.3 Farriimaha qoraalka ah
1.2.4 Farriimaha Codka iyo Muuqaalka
1.2.5 Gudbinta faylka
1.3 Madal badan
Jami waxay diiradda saaraysaa qodobkaan, maadaama asturnaanta ay muhiim u tahay codsi adeegsanaya internetka. Jami waxay kuu oggolaaneysaa inaad si xor ah ula xiriirto oo aad u ilaaliso asturnaantaada, ha ahaato farriinta dirista, wicitaannada maqalka ama fiidiyowga, ama wadaagista faylka.
Samee wicitaanada shirarka oo leh tiro aan xadidnayn oo kaqeybgalayaasha leh tayada maqalka ee Opus 48 kHz.
Waxay siisaa khibrad tayo sare leh wicitaanada fiidiyowga oo leh qeexitaano qeexan (HD).
Farriimaha qoraalka ah
Waxaa ka mid ah farriin qoraal ah oo ammaan ah oo qarsoodi ah, iyada oo aan lahayn xarun dhexe oo madal ah, iyada oo la adeegsanayo tiknoolajiyada shabakadda loo qaybiyey. Iyo suurtagalnimada wadaagista muujinta iyo shucuurta iyadoo la adeegsanayo emojis iyo animations GIF.
Farriimaha Codka iyo Muuqaalka
Waxay suurtogal ka dhigaysaa in hal guji lagu diro cod iyo cajalado duubitaan (clips). Si loo fududeeyo farriimaha dhaadheer ama faallooyinka dhaadheer ee leh khibrad aad u macaan oo la yaqaan.
Waxay u oggolaaneysaa dirista feylasha badan ee fiidiyoowga ah (sawirrada iyo fiidiyowyada) qaabab guud oo aan lahayn xaddidaad cabbir ka dhexeysa isticmaaleyaasheeda. Sameynta faylasha .gif, .jpg, jpeg, .png, .webp, .ogg, .mp3, .wav, .flac, .webm, .mp4 iyo .mkv ayaa si toos ah loo soo dejistay.
In kasta oo ay ahayd Horumar Software Bilaash ah oo diirada lagu saaray GNU / LinuxMarka lagu daro barnaamijkan ama Nidaamka Howlgalka, waxaa loo sameeyay si asaasi ah in lagu fuliyo nidaamyada Howlgalka soo socda:
Nidaamka Howlgalka GNU / Linux wuxuu u hayaa faylal il iyo fulin loogu talagalay:
18.10 (64 waxoogaa)
18.10 (32 waxoogaa)
18.04 (64 waxoogaa)
18.04 (32 waxoogaa)
16.04 (64 waxoogaa)
16.04 (32 waxoogaa)
Kala bixin (9)
Intaa waxaa dheer waxaa ku jira keydinta qalabka gacanta lagu rakibo ee Qaybinta kor ku xusan, oo lagu daray Fedora 28 iyo 29. Iyo sii ballaadhinta astaamaheeda ama fursadaha rakibidda waxay faa'iido u leedahay in lagu booqdo wiki-ka websaydhkeeda GitLab: Jami on Git.
Jamiilayaasha horumariya ayaa bixiya in codsigiisa, madalkiisa iyo tikniyoolajiyad casri ah ay wada jiraan wax soo saar aad u fiican oo ah horumarka adduunka ee Barnaamijka Bilaashka ah. Taasi waxay u hoggaansameysaa heerarka caadiga ah ee Amniga iyo Asturnaanta ee lagama maarmaanka u ah codsiyada farriimaha internetka ee hadda jira.
Iyo in lagu daro ku darida shaqooyinka caadiga ah ee dirista iyo helitaanka fariimaha qoraalka, codka, fiidiyaha, wicitaanada, wicitaanada fiidiyaha iyo faylasha qaabab kala duwan iyada oo hoos timaadda deegaan loo qaybiyey, la qabsan karo, awood leh, bilaash ah oo aan lahayn xayeysiis, si loogu oggolaado adeegsadayaasheeda dareenka xorriyadda ee lagama maarmaanka u ah marka la isticmaalayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Jamii: Barxad cusub oo loogu talagalay isgaarsiinta bilaashka ah iyo guud
Waad ku mahadsantahay macluumaadka ku saabsan Jami. Mahadsanidin.
Salaan Karmen! Waxaan ku faraxsanahay inaad jeceshahay macluumaadka oo uu faa'iido lahaa. Waad ku mahadsantahay faalladaada.
Nooca cusub ee Deepin 15.10 wuxuu la yimid KWin iyo in ka badan